Giant Bear Claw / Hercules Shrub - Dhirta sunta ah
Herkulesstaude waxaa sidoo kale lagu yaqaan magaca Riesenbärenklau ama Bärenkralle. Xeebaha waaweyn ee dhaadheer wuxuu ka yimaadaa qoysaska dhirbaaxada, waxayna asal ahaan ka soo jeedaan Caucasus. Markii ugu horraysay, warshadda 1985 ayaa ka muuqatay Yurub.
Geedkii Hercules / Hoggeed weyn
Buulka Hercules wuxuu gaari karaa cabbir ilaa saddex mitir ah. Jidhka hadda jira waa mid madow ah oo leh timo wanaagsan oo laga helo geedka oo dhan.
Dhexdhexaadiyaha jirida waa laba ilaa toban sintimitir, iyadoo ku xiran hadba tirada guud ee warshadda. Caleenta cagaaran ee hoggaaminta hogweed ee aasaasiga ahi waxay leeyihiin dherer dherer ah hal mitir. Ubaxyada waaweyn ee caadiga ah waxay badanaa leeyihiin ballac ah 30-50 centimeters. Geedka Hercules wuxuu ku jiri karaa 80.000 ubaxyo hal mar ah.
Wakhtiga ubaxu wuxuu ka bilaabmaa Juun ilaa dhammaadka Luuliyo. Ubax cad waxay leeyihiin dhexroor ugu sarreeya oo ah Ximmuun 2 oo kor u kaca meel sare. Tan iyo caleemaha timo cad waxay u egtahay mid la mid ah cagaha xayawaanka caleen, dhirta waxaa loo yaqaan Bärenklau sababtan darteed.
Ka dib markii qolofta abuurka ah ee miro ayaa la sameeyey, geedka dhinto. Haddii dhirtu aysan u bislayn, si sahlan ayey u noolaan kartaa dhowr sano. Abuurka Herkulesstaude waa mid aad u liitaa sanado badan.
Buulka Hercules ma koraan carrada acid. Haddii kale, waxay tahay mid aad u liidata waxayna u baahan tahay qorrax yar si ay u noolaadaan sanado badan.
Hoggaanka khatarta ah waxaa ku jira furocoumarins, kaas oo keena maqaarka maqaarka ka dib marka uu qofku taabto maqaarka.
Xitaa xiriir gaaban oo caleemo leh ayaa laga yaabaa inay ku filan tahay in maqaarka uu dib u casriyeeyo. Xaalado ka sii daran, xitaa finanku waxay sameyn karaan maqaarka. Kuwani waa kuwo aad u xanuun badan oo si sahlan u barara oo waxay keeni karaan gubasho heerkul ah iyo labaad.
Ka sokow maqaarka maqaarka, iyo kaadida oohinta waxay sidoo kale noqon kartaa natiijo qandho, dhibaatooyin wareega iyo dhidid. Dareen-celintaasi waxay qaadan kartaa toddobaadyo.
Markaad taabato warshadda, waa inaad ku dhaqdaa maqaarka maqaarka ku habboon si biyo ah iyo saabuun. Haddii maqaarka maqaarku dhaco, dhakhtarku waa inuu si dhakhso ah loola tashadaa si daaweynta haboon loo isticmaali karo.
Marka la barbardhigo Giant Bear Claw, Meadow Hogweed wuxuu u dhashay Yurub. Ugu horreyntii waxa uu helayaa Giant Bear Sheep on bangiyada iyo godeyshaha iyo u kordhaa sida caadiga ah on ciidda, ciidda dabacsan. Aragga, dhirta labaduba waxay u muuqdaan kuwo isku mid ah.
Haddii dhirtu ay yar tahay, ma jirto khatar ah inay sumawdo. Badanaa caleemaha waxaa badanaa loo isticmaalaa sida xayawaanka. Si kastaba ha ahaatee, xayawaanka waa inaysan helin wax badan oo ka mid ah, maadaama ay sababi karto cuncun maqaarka. Iyada oo ku xiran xajmiga warshadda dhalinyarada, jirida ayaa la cuni karaa hilib, ama la kariyey qasafad.
Dhirta sunta ah ee caruurta
Ambrosia - Dhirta sunta leh
Midabaynta dhirta bogga
Roses & Rose Care | Dhirta beerta
Daryeelka Orchids - Sidee loo iloobi karaa orchids ay ...
Midabaynta sawirrada dhirta